Files beddelashada ka telefoonka ah in PC ah ayaa noqday arrin caan ah oo la kaca ee technology mobile iyo computer. Raadi meel midig ee software in ay hubiyaan in aad kala iibsiga file habboon noqon kartaa yara adag in tiro balaadhan oo ah waxyaabaha laga heli karo suuqa maanta mahad. In muddo gaaban, tartan yimaado raadinta tayada iyo qodobkan u muuqataa inuu soo aaso wareer. Waxaan qaadan aragtida jidh of 6 qalab taagan mid ah kuwa kale ee xukunka kala iibsiga file iPhone-PC soo baxay.
Wondershare TunesGo Retro waa aalad in Sarre ee Details weyn oo dhan qaababka laga bilaabo aragnimo user. Software waxaa loogu talagalay in dadka isticmaala ha la kulmi fudayd darafkeeda ee suuqa kala iibsiga file. Waxa ugu fiican waa in aad u baahan tahay oo kaliya tallaabooyin fudud oo qaar ka mid ah si loo gaadho kala iibsiga file. Software ogolaanaysaa iPhone xiriirada dhoofinta users, sawiro, iyo faylasha kale oo aan ku xuso xaqiiqada ah in qalab ogol user a si aad u sameysato faylasha sida sawiro, music, iyo xiriirada ka mid ah kuwa kale. Waxaad ka badhamada Download hoos ku soo bixi kartaa software ah.
Ku rakib iyo surin telefoonka isticmaalaya ah USB xadhig-ka files in aad telefoon la marsiiyey doonaa oo qorsheysay in aad si fudud u dhex maraan iyo dooran hawlgal kasta oo aad doonaysaan. Waxaad dooran kartaa faylasha ay doonayaan in ay ku wareejin ka galeeysid oo guji dhoofinta. Markaas barnaamijka kaa caawin doona inaad shaqo hesho sameeyey. Waxaad kartaa riix halkan si akhri wax dheeraad ah.
Waa aalad arrintaasna waa u fududahay in ay isku dayaan in kiiska aad wax shaki ah oo tayo leh waxa ay u muuqataa in ay bixiyaan.
Transfer 2. Xilisoft iPhone
Qalabkan waxaa loo qorsheeyay in uu caawiyo dadka isticmaala waafajinta iPhone ay la PC halka sidoo kale u oggolaadaan maamulka file. Software ayaa sidoo kale u ogolaataa user a si ay u helaan isaga ama iyada iPhone sida a disk qaadi karo dibadda Halkan ka qaboojiyo file helitaanka adigoo isticmaalaya sahamisa file ah. Si aad u gooyay sheekada dheer gaaban, software waa sumcad siiyo hab fudud in ay dib u kor files, xiriirada iyo fariimaha halka .Wadashaqayntaas taageero la codsiyada kale ee muhiimka ah sida Lugood.
Si aad u isticmaasho software tan, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo oo marka hore-ka rakibi http://www.xilisoft.com/iphone-transfer.html . Ka dib markii la rakibey, abuurtaan qalab iyo xirmaan telefoonka isticmaalaya cable USB ah iyo software ah. Software ayaa si toos ah lagu ogaan doonaa oo laga baarayo qalabka. Ka dib markii iskaanka, faylasha aad la diyaarin doonaa qaybaha on galeeysid bidix ee interface ka.
Waxaad dooran kartaa hadba faylasha aad rabto in lagu wareejiyo si aad PC iyo guji Si Computer
Syncios ayaa caan ku ah suuqa kala iibsiga file ka PC si iPhone laakiin waxaa haatan bixiyaan suuqa kala iibsiga file ka iPhone in PC. Waa Manager macruufka ah in sii fiican tahay in multimedia content u hagaagsan iyo dhoofinta content ee gurmad iyo in loo isticmaalo in PC ah. Waa ay fududahay ah si loo soo dajiyo xushmad qalab ah saaxir dawaarle dhigay in la wado wax aad u! An fududahay in la isticmaalo ama halkii saaxiibtinimo interface user ka dhigaysa wax sahlan marka wareejinta faylasha u dhexeeya PC iyo telefoonka. Si aad u isticmaasho this software, download oo ku xidh ka http://www.syncios.com/ . Ka dib markii ay ku rakibidda, xirmaan iPhone oo isticmaalaya cable-ka ah USB dekedda USB ah PC-sida qalabka kale ee ku xusan, software ah u qabanqaabisaa files ee ku saabsan qeybta bidix ee interface ka. Just qaado kuwa aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan oo guji dhoofinta .
Qalabkani waxa uu ka mid yahay oo kale in hawlaha si aad u wanaagsan la kala iibsiga oo hagaagsan oo Lugood. Qalab wuxuu kuu ogol yahay hab jiita iyo hoos u dhac ku kala iibsiga file in Lugood iyo drive PC ah. Waxaa si toos ah u ogaadaa telefoonka aad furaysto galay PC taas oo aan xuduud lahayn, waayo, dadka isticmaala si ay u helaan tusmada telefoonadooda. Connect aad telefoon si PC dooro content aad rabto in lagu wareejiyo ka galeeysid ka tagay.
Software Tani waxay sidoo kale waa wanaagsan ee maareynta maktabadda music aad ee dareenka ah in ay u sii dayn kartaa in aad diyaarin files music iyo dib u dhiska playlists.
Transfer 5. la yaabka leh iPhone
Tani waa software ah oo keena xal maamulka macruufka Dhammeeyaha in dadka isticmaala. Tayada boost qalab iyo miday-ay taageerto soo diyaariyeen balaadhan oo ah kala iibsiga file waxaa laga files multimedia iyo document. Its miday dheeraad ah u kordhiyay galay zone waafaqid. Software wuxuu taageeraa shiidaa qalab iPhone kasta. Interface waa istaahisho in laga hadlo iyo sidoo kale la software isufaan dhexdiinna ah interface user wanaagsan in afar luqadood, si loo waafajiyo users ah. Si aad u isticmaasho software ah, kala soo bixi version kugu habboon ka http://www.amazing-share.com/iphone-transfer.html .
Leawo ayaa ka mid ah samaynta software adduunka ugu fiican iyo tani waa tusaale wanaagsan oo ah qalab u fiican iPhone inay kala iibsiga file PC. Waa xirmo buuxda u eg in ay la tacaalaan kala iibsiga ee qalab kasta Apple oo lagu daray gurmad jidaynayey faylasha iPhone. Software waa mid gaar ah oo ku syncing aad iPhone la Lugood, maaraynta files si loo yareeyo yaac iyo hab si dhakhso ah oo haboon. Si aad u isticmaasho software-ka, download iyo rakibi ka www.leawo.org . Waxa loo baahan yahay Lugood rakibay macnaha in aad u baahan doontaa in iyagu marka hore lagu rakibay. Connect aad iPhone in aad kombuutarka ..
Hubi si aad u dooro file ku jira iyo nuqul kuwa aad jeclaan lahayd inaad ku kaydiso oo guji
Shaxda soo socota ayaa ku siinaysaa dib u eegis dhinac-ilaa-dhinac ee sooca ah aalad:
Taageerada: macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6, macruufka 5 iwm
waddaa on Windows iyo Mac
Wareejinta: Documents, Videos, Music, buugaag, Photos, Podcasts iwm
Si toos ah u xaliyo & tayadoodii macluumaad song
Fududahay in la rakibo iyo Isticmaal
Taageerada iPhone / Ipad / iPod
Kuu ogolaanayaa dhoofinta iyo Management of Music, Photos, Videos iyo Kutubta
Taageerada: iPhone / Ipad / iPod
Wareejinta: Music, videos, sawiro, barnaamijyadooda, eBooks, xiriirada, farriimo
Taageerada: Windows iyo Mac OS
Wareejinta: Music, videos, sawiro, barnaamijyadooda, fariimaha, Kalandarada, iwm
La yaabka leh iPhone Transfer Tool
Wareejinta: music, filim, sawiro, Lugood U, Podcast, Roll Camera, SMS, Xiriirada, giraan codadka, cadaymaha codka
Wareejinta: music, filimada ,, ringtones, bandhigyada TV photos, barnaamijyadooda iyo Camera files Roll
Taageerada: iPhone / ipod / iPad
> Resource > iPhone > Top 6 qalabka si ay u gudbiyaan files ka iPhone in PC